Galmudug oo ka soo horjeesatay habraaca Doorashada Wasaaradda ... | Universal Somali TV
Wasaaradda arrimaha Gudaha Xukuumadda Soomaaliya ayaa xalay shaacisay Habraaca Guud ee doorashooyinka dowlad goboleedyada, hayeeshe go’aankaas Wasaaradda ayaa waxaa kasoo horjeestay Maamulka Galmudug.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Galmudug Burhaan Maxamed Samatar ayaa sheegay in aan lagala tashan Warqada kasoo baxday Wasaaradda Arrimaha Gudaha Dowladda Somaliya ee ku saabsan doorashooyinka, isla markaana ay tixgelin siin waysay.
Waxa uu soo hadal qaaday hadalkii xalay kasoo baxay Guddoomiyaha Baarlamaanka Galmudug Cali Gacal ee ahaa in doorashada Madaxweynaha Galmudug ay dhici doontaa Afarta Bisha July ee Sanadkan.waxaana uu sheegay in Wasaaradda arrimaha Gudaha Soomaaliya ay meesha ka saartay awoodii doorashooyinka ku lahaayeen Dowlad goboleedyada.
Isaga oo la hadlaayay Idaacadda BBC-da laanteeda afka Soomaaliga ayuu sheegay in xilliga doorashada Galmudug ay ka dhaceyso ay ku qoran tahay dastuurka Galmudug iyo heshiiskii Galmudug iyo Ahlusuna ee dalka Jabuuti.
Waa maamulkii ugu horeeyay ee kasoo horjeesta habraaca doorashooyinka dowlad Goboleedyada oo ay xalay soo saartay Wasaaradda arrimaha gudaha iyo dib u heshiisiinta Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya.
Kan-xigaShabaab oo xalay weerar culus ku qaad...
Kan-horeMadaxweynaha Puntland oo Maamul iyo T...
47,892,029 unique visits